खुसीको खबर: कन्चनको न्यायको लागी लड्ने भए ज्ञानेन्द्र शाही,अनिशाको परिवारबाटआयो धम्कि,आमाको रुवाबासी – Dainik Samchar
March 29, 2021 234
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोलाकाठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका कामदारले पुनः सोही वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेको खण्डमा अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । आज हामी तपाईंलाई अनलाइनबाटै कसरी वैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्वीकृति लिने भन्ने विषयमा बताउँदै छौं ।यदि तपाईंले पुरानो श्रम स्वीकृति लिँदा आफ्नो आँखा वा औँठाछाप (बायोमेट्रिक) रजिस्टर गर्नुभएको छ भने मात्रै अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्नुहुन्छ । तर
बायोमेट्रिक दर्ता छैन भने पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट लिन सकिँदैन ।यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा गएर आफ्नो आँखा वा औँठाछाप दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि १५०० रुपैयाँ कल्याणकारी कोष शुल्क र कामदारको उमेर अनुसार ३००० देखि ९००० हजार रुपैयाँसम्म वीमा शुल्क लाग्नेगरेको छ । जुन तपाईंले ईसेवा, खल्ती जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।पुनः श्रम स्वीकृति कसरी लिने१. वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि सुरुमा वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । एकछिन सोच्नुहोस् त तपाईंको स्मार्टफोन पानीमा खसेको कयौं दिनपछि भेटियो भने के होला ? पक्कै पनि तपाईंको स्मार्टफोनले काम गर्नेछैन । क्यानडाकी एञ्जी करियरे नामक युवती यस्तै घटनाको सामना गर्न पुगिन् ।नाइन टु फाइभ म्याकका अनुसार एउटा तलाउमा माछा मार्नेक्रममा दुर्घटनावस उनको आईफोन इलाभेन पानीमा खस्यो । उनले सोचेकी थिइन् अब फोन पूर्ण रुपमा काम नलाग्ने भइसक्यो ।तर जब उनले आफ्नो फोन चार्जिङमा लगाइन्, तब उनको खुशीको सीमा नै रहेन । आईफोन मजासँग चार्ज भइरहेको थियो र फोनका सबै फंसन काम गरिरहेका थिए ।
एञ्जी करियरेले आफ्नो फोन हराएपछि फेला पर्ने आश मारिसकेकी थिइन् । उनको यात्राका सबै तस्वीर त्यही फोनमा सेभ थिए । ती तस्वीर गुमाउँदा उनी निकै तनावमा थिइन् ।तर उनको भाग्यमाा सायद अरु नै केही लेखिएको थियो । एञ्जी करियरेले आफ्ना केही साथीहरुसँग सम्पर्क गरिन् ।त्यसपछि उनीहरुले एउटा शक्तिशाली चुम्बकको व्यवस्था गरेर तलाउमा खसाले, जहाँ स्मार्टफोन खसेको थियो । चुम्बकसँगै आईफोन इलाभेन फर्किएर आयो ।
Prevनेपालले बङ्गलादेशलाई २-१ ले हराउदै जित्याे त्रिदेशीय फुटबल कपकाे उपाधि
Nextविशेषज्ञहरूले जन्मेको २४ घण्टा पनि बाच्न सक्दैन भनेका क्लाउडियो एक प्रेरणादायक वक्ता हुन्।पढ्नुहोस पुुरा
आज फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य !